लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन अस्ट्रेलियन साङ्केतिक भाषा आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको ईवी उज्बेक उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू एफिक एस्टोनियन ओक्पे ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा काबीय किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गुजराती गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चुभास चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापटेक (इस्मस) जापानी जुला जुलू टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन टेटन डिली डच डाँग्मे डेनिश ताजिकी तामिल तेलगु तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाइजेरियन पिजिन नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फन फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बासा (क्यामरून) बिकोल बुल्गेरियन बोउलो भारतीय साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेन्डा मङ्गोलियन मराठी मले मल्यालम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी मिङ्रेलियन म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वारे-वारे वेल्श वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सिंहला सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
यरूशलेममा एउटा महत्त्वपूर्ण सभा आयोजना गरिएको छ। राजा दाऊदले सबै राजकुमार, अफिसर र वीर पुरुषहरूलाई भेला गराएका छन्‌। एउटा विशेष घोषणा सुनेर तिनीहरू सबै खुसीले गद्‌गद छन्‌। यहोवाले दाऊदको छोरा सुलेमानलाई एउटा अत्यन्तै भव्य भवन निर्माण गर्न अह्राउनुभएको छ। त्यो भवन साँचो परमेश्वरको उपासनाको लागि समर्पित हुनेछ। उमेर ढल्किसकेका इस्राएलका राजा दाऊदलाई यहोवाले नै त्यस भवनको नक्सा दिनुभएको छ। अनि त्यो नक्सा दाऊदले सुलेमानलाई दिएका छन्‌। दाऊद यसो भन्छन्‌, “यो काम महान्‌ छ। किनभने यो भवन मानिसको निम्ति होइन तर परमप्रभु परमेश्वरको निम्ति हो।”—१ इति. २८:१, २, ६, ११, १२; २९:१.
त्यसपछि दाऊद यो प्रश्न सोध्छन्‌: “अब मुठी खोलिकन आज परमप्रभुलाई दिन को राजी छ?” (१ इति. २९:५) तपाईं त्यहाँ भएको भए के गर्नुहुने थियो? के तपाईं त्यस महान्‌ कामलाई सघाउन अघि सर्नु हुनेथियो? इस्राएलीहरूले तुरुन्तै कदम चाले। “मानिसहरूले यसरी राजीखुशीसित दिएकोमा आनन्द मनाए। किनभने आफ्ना हृदयको भक्तिसाथ परमप्रभुको निम्ति तिनीहरूले राजीखुशीसित ती दिएका थिए।”—१ इति. २९:९.
सयौं वर्षपछि यहोवाले त्यस भव्य मन्दिरभन्दा अझ ठूलो कुरा अर्थात्‌ उहाँको महान्‌ आध्यात्मिक मन्दिर स्थापना गर्नुभयो। यो मन्दिर भनेको येशूको बलिदानको आधारमा यहोवालाई उपासना गर्ने प्रबन्ध हो। (हिब्रू ९:११, १२) आज यहोवाले कसरी मानिसहरूलाई आफूसित मिलाप गराउँदै हुनुहुन्छ? चेला बनाउने कामद्वारा। (मत्ती २८:१९, २०) यस कामले गर्दा वर्षेनी लाखौंले बाइबल अध्ययन गरिरहेका छन्‌, हजारौंले बप्तिस्मा गरिरहेका छन्‌ र सयौं नयाँ मण्डलीहरू स्थापना भइरहेका छन्‌।
यस्तो वृद्धिले गर्दा बाइबलआधारित प्रकाशनहरू अझ धेरै छाप्नु परेको छ, राज्यभवनको निर्माण र मर्मतसम्भार गर्नु परेको छ। अनि सम्मेलन र अधिवेशन स्थलहरूको आवश्यकता अझै बढेको छ। सुसमाचार प्रचार गर्ने यो काम के साँच्चै विशाल र इनामदायी छैन र?—मत्ती २४:१४.
यहोवा र छिमेकीप्रतिको प्रेम अनि राज्य प्रचारकार्यको महत्त्व बुझेकोले गर्दा परमेश्वरका सेवकहरू राजीखुसीसित अनुदान दिन्छन्‌, तिनीहरू ‘मुठी खोलेर परमप्रभुलाई दिन’ अग्रसर भएका छन्‌। यसरी “आफ्नो धन-सम्पत्तिले परमप्रभुको आदर” गर्न पाउनु अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। मानव इतिहासमा भइरहेको सबैभन्दा महान्‌ काम सम्पन्न गर्न यी अनुदानहरू सही तरिकाले प्रयोग गरिएको देख्न पाउँदा हामी रमाउँछौं!—हितो. ३:९.
आज थुप्रैले “केही” पैसा ‘छुट्टयाएर राख्छन्‌’ अनि “विश्वव्यापी कार्य” लेखिएको मण्डलीको अनुदान बाकसमा खसाल्छन्‌। (१ कोरि. १६:२) हरेक महिना मण्डलीहरूले यो पैसा आफ्नो देशमा रहेका यहोवाका साक्षीहरूको कार्यालयमा पठाउँछन्‌। यो अनुदान तपाईंले आफ्नो देशमा यहोवाका साक्षीहरूले प्रयोग गरिरहेको कानुनी संस्थामा सीधै पठाउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईंको देशमा यहोवाका साक्षीहरूले प्रयोग गरिरहेको कानुनी संस्थाको नाम थाह पाउन शाखा कार्यालयसित सम्पर्क राख्नुहोस्। ठेगानाको लागि www.jw.org/ne हेर्नुहोस्। तपाईंले सीधै पठाउन सक्ने अनुदान यसप्रकार छन्‌:
इलेक्ट्रोनिक बैंक ट्रान्सफर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा मोबाइल मनी ट्रान्सफरद्वारा अनुदान पठाउन सकिन्छ। कुनै-कुनै शाखामा jw.org वा अरू वेबसाइटमार्फत पनि अनुदान पठाइन्छ।
सर्त राखी दिइने अनुदान
नगद, बहुमूल्य निजी सम्पत्ति र अन्य कुरा दिएर पनि परमेश्वरको राज्यसम्बन्धी कामलाई टेवा पुऱ्याउन सकिन्छ। ती तल सूचीमा दिइएका छन्‌। तीमध्ये जुनसुकै तरिका प्रयोग गरे तापनि पहिला आफ्नो देशको शाखा कार्यालयसित सम्पर्क गरेर उपलब्ध तरिका पत्ता लगाउनुहोस्। हरेक देशको कानुनी आवश्यकता र करसम्बन्धी नियम फरक हुन्छ। त्यसैले अनुदान दिने सबैभन्दा उपयुक्त तरिका छान्नुअघि कर तथा कानुनसम्बन्धी जानकार परामर्शदाताहरूको सल्लाह लिनु महत्त्वपूर्ण छ।
बैंक खाता: बैंक खाता, निक्षेप प्रमाण-पत्र वा व्यक्तिगत अवकाश खाता स्थानीय बैंकको नियमअनुसार यहोवाका साक्षीहरूले प्रयोग गर्ने संस्थालाई दिन वा शेषपछि हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ।
वार्षिक भत्ता पाउने गरी दिइने दान: कुनै व्यक्तिले रकम अथवा जायजेथा यहोवाका साक्षीहरूले प्रयोग गर्ने संस्थालाई अनुदान दिन सक्छ। त्यसको बदलामा दाताले बाँचुन्जेल हरेक वर्ष निश्‍चित भत्ता पाउँछ। वार्षिक भत्ता पाउने गरी दिइने अनुदानको प्रबन्ध गरेको वर्षमा दाताले आयकरमा केही छुट पाउन सक्छ।
“परोपकारी योजना” भन्ने अभिव्यक्तिले यस प्रकारका अनुदानहरूको लागि दाताले केही योजना बनाउनु आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट हुन्छ। परोपकारी अनुदानका केही तरिकाद्वारा यहोवाका साक्षीहरूको विश्वव्यापी कार्यलाई टेवा पुऱ्याउन चाहने व्यक्तिहरूलाई मदत गर्न अङ्‌ग्रेजी र स्पेनिश भाषामा च्यारिटेबल प्लानिङ्‌ग टु बेनिफिट किङ्‌डम सर्भिस वर्ल्डवाइड पुस्तिका तयार पारिएको छ। कुनै व्यक्तिले आफू जीवित छँदै वा आफ्नो शेषपछि विभिन्न तरिकामा कसरी दान दिन सक्छ भनी जानकारी दिन यो पुस्तिका तयार पारिएको हो। आफ्नो देशको करसम्बन्धी नियम वा अन्य कानुनी नियमहरूले गर्दा यस पुस्तिकामा भएको जानकारी तपाईंको अवस्थासित हुबहु नमिल्न सक्छ। परोपकारी अनुदान दिने यस्ता तरिकाहरू प्रयोग गरेर धेरैले विश्वभर रहेका यहोवाका साक्षीहरूको काममा मदत गरेका छन्‌, साथै यसो गर्दा तिनीहरूले करमा धेरै छुट पाएका छन्‌। तपाईंको देशमा यो पुस्तिका उपलब्ध छ भने आफ्नो मण्डलीको सचिवबाट एक प्रति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
थप जानकारीको लागि jw.org/ne को गृहपृष्ठको तलतिर “हाम्रो कामको लागि अनुदान दिने” लिङ्‌क क्लिक गर्नुहोस् वा शाखा कार्यालयसित सम्पर्क गर्नुहोस्।